Renaissance Curaçao inosimudzira nzvimbo yekutaridzika nekutaridzika kutsva
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Resorts » Renaissance Curaçao inosimudzira nzvimbo yekutaridzika nekutaridzika kutsva
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Curacao Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Uyu Kukadzi unoratidzira makore gumi-egore reiyo Renaissance Curaçao Resort & Casino ichivhura madhoo ayo. Kupemberera kubudirira kwavo kwakaramba kuchikosha sechinhu chakakosha kunharaunda yeCuraçao yekushanya, hotera iyi ichave ichizorodzwa zvakanyanya yakagadzirirwa kupa mamwe maratidziro erunyararo uye kutandara kuvashanyi.
"Tinoda kuratidza runako rweCuraçao nemhepo inodzikama uye inozorodza," akadaro General Manager, Maylin Trenidad. "Vashanyi vedu vachacherekedza yakajeka, yazvino dhizaini iyo zvakare inogara yakatendeka kumidzi yedu yeCuraçao uye inoratidza chiratidzo cheRenaissance."
Kugadziridza kuchatanga musi waApril 1 uye kuchapedziswa muzvikamu zvakawanda. Iyo yekudyira, nzvimbo yekuchengetedza, uye kasino yakarongerwa kupedziswa muna Nyamavhuvhu. Kwechikamu chechipiri, dzimba dzese dzevaeni dzakagadzirirwa kupera kwaDecember.
Vaenzi vanogona kutarisira zvigadzirwa zvemunguva yemberi kusanganisa zvinhu zvemukati nekunze, nepo vachivakawo paRenaissance Curaçao's general chitsuwa chic aesthetic. Iwo makuru akakosha anosanganisira:
• Nyowani ye "Luxe Cocoon" Lobby - Iyo nyowani yekutandarira inopa nzvimbo yepedyo asi inonyudza yevaenzi kuti vafare pavanosvika nekugara kwavo kwese. Inoratidzwa mukati mebhodhi, kubva pamidziyo kuenda kumifananidzo yakapararira munzvimbo iyi, machira anonakidza uye kushamisika kwakavanzika kunofadza mukona yega yega.
• Yakavandudzwa Mukana weCasino - Iyo kasino yakashanyirwa zvikuru muCuraçao ichagamuchira vaenzi munzvimbo inosvika chiuru nemazana mashanu yenzvimbo yemitambo yekutamba ine mukova wakashama uye wazvino
• Dzakakwidziridzwa Dzimba dzevaeni - Dzakamisikidzwa dzimba dzevaeni dzine musanganiswa wemaguta uye zvakasikwa zvinhu zvinosanganisira zvitsva zvinowedzerwa senge yemuno ceramic art uye yakajeka asi isina kujeka mavara. Palette yakaomesesa iyo yese yakagadzirwa uye yakanatswa ichagadzira mukana wekupotera wega kana nzvimbo yekuzorora yebasa.
• Refreshhed Nautilus Restaurant - Iyo yese yekudyira dhizaini inoshandurwa kuratidza yechimanje-manje chi pfungwa.
Kugadziridza kuchaitwa muzvikamu zvichibvumira kuti kugadziriswazve kupedzwe nenzira inoshanda uye nenguva, ukuwo uchibvumira vashanyi kuti vasavhiringidzike sezvinobvira.